नायिका पूजाको पार्टी: रवि लामिछाने र निकिता रोटी बेल्दै देखिए, दिपा दिपक पनि पुगे (भिडियो)
May 12, 2020 1101
कोरोना फैलन नदिन सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण अहिले कलाकारहरु घरमै छन् । उनीहरु परिवारका साथ’मा रमाइलो समय बिताइरहेका छन् ।
यसैबीचमा कलाकार तथा ना’यीका पुजा शर्माको भर्खरै जन्मदिन मनाएकी छन् । हरेक वर्ष साथीभाईका साथमा जन्मदिन मनाउने पुजाले यो वर्ष फेसवुक लाइभमा केक का’टेको देखाएर जन्मदि’न मनाइन् ।
उनलाई राति १२ वजे परिवारका सदस्यले भने जन्मदिनको शुभकामना दिएका थिए । मध्यरातमा ला’इभमा आएकी पुजालाई जन्मदिनको शुभकामना दिनेको सामाजिक सञ्जालमा ओइरो नै लागेको थियो । यसैबीच निकै नजि’कको सम्बन्ध छ भनिएका अर्का ना”यक आकाश श्रेष्ठले पनि पुजालाई मध्यरातमै जन्मदिनको शुभका’मना दिएका थिए ।
फेसवुक लाइभमा आउँदै पुजालाई उनले जन्मदि’नको शुभकामना दिएका हुन् । आकाशलाई पुजाले जन्मदिनमा शुभकामना दिएकोमा धन्यवाद ब्यक्त गरेकी थिइन् ।
तर जन्मदिन सकिएको केही दिनपछि पु’जाले मध्यरातमा पार्टी दिएकी छन् । लकडाउनकै बीचमा उनले पार्टी दिएकी हुन् । उनको पार्टीमा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवी लामिछाने, उनकी पत्नी, दिपाश्री निरौला, दिपकराज गिरी लगायतका कलाकार पुजा’को घरमा पुगेका थिए । उनको घरमा भएको जमघ’टको भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
लकडाउनमा आफ्नो आफ्नो घर’मा रहेका पुजा र आकास बेलाबखत सामाजिक सञ्जाल मा’र्फत साक्षातकार हुने गरेका छन् । उनीहरु’लाई लिएर अर्की नायीका शुष्मा कार्की’ले विवाद उत्पन्न गरेपछि पनि दुवै जना सामाजिक सञ्जाला लाइभमा आएर त्यो कुराको’ खण्डन गरेका थिए ।
शुष्माले’ पुजा र आकासले फेक फ्यानको नामवाट फेसवुक बनाएको र त्यसवाट आफ्नो प्रशंसा ‘आफै गर्ने र आलोचकलाई नकारात्म’क टिप्पणी गर्ने गरेको बताएकी थिइन् । उनले त्यसको प्रमा’ण समेत आफुसंग रहेको बताएकी थिइन् ।
उनको यस्तो अभिब्यक्ति पछि पुजा र शुष्मा’को फ्यानहरु सामाजिक सञ्जालमा बाँडि’एका छन् । एक अर्का प्रति नकारात्मक टिप्पणीमा उत्रिएका छन् । भिडियो सहित…
Prevआज फेरि ज्ञानेन्द्र शाही पक्राउ, पक्राउ’ गर्नुको कारण यस्तो छ (हेर्नुहोस् भिडियोसहित)
Nextआफ्नो घर बझा​ङ पुगेकी सोनीकालाई ‘१२ लाखकै’ कुरा उठाए पछि ‘म जोगी बन्छु’ भन्दै जोगीकै लुगा लगाएर हिडिन् (भिडियोसहित)
आज पनि घट्यो सुनको मूल्य, आज तोलाको कतिमा झर्यो ? हेर्नुहोस्…
गर्भवती प्रसव पिडाले छटपटाउँदा पनि अस्पतालले भर्ना लिएन, यसरी सडकमै जन्मियो बच्चा
ह्वात्तै बढ्यो सुनको भाउ, आज सुनचाँदीको भाउ कति पुग्यो ? हेर्नु`होस्…